Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Thyroid Function Tests လည်ပင်းကြီး ဟော်မုန်း စစ်ဆေးခြင်း
Thyroid Function Tests Laboratory Values and Interpretation လည်ပင်းကြီး ဟော်မုန်း စစ်ဆေးခြင်း နှင့် ဓါတ်ခွဲခန်း အဖြေများကို ဖတ်ခြင်း
(၁) T3 / Serum triiodothyronine ပုံမှန် = 80 to 220
- Less than 80 can indicate hypothyroidism
- 80 ထက်နည်းနေရင် လည်ပင်းကြီး ဟော်မုန်းနည်းရောဂါဖြစ်နိုင်တယ်။
(၂) Total T4 / Serum thyroxine ပုံမှန် = 4.5 to 12.5
- Less than 4.5 can be indicative of an underfunctioning thyroid when TSH is also elevated.
- 4.5 ထက်နည်းပြီး TSH ပါများနေရင် လည်ပင်းကြီး အလုပ်နည်းနေနိုင်တယ်။
- Over 12.5 can indicate hyperthyroidism.
- 12.5 ထက်များနေရင် လည်ပင်းကြီး ဟော်မုန်းများရောဂါဖြစ်မယ်။
- Low T4 with low TSH can sometimes indicateapituitary problem
- T4 လဲ နည်းနေမယ်၊ TSH လဲနည်းနေမယ်ဆိုရင် (ပစ်ကျူထရီ) ဆိုတဲ့ ဦးနှောက်ထဲက ဟော်မုန်းတွေထုတ်တာနဲ့ ဆိုင်တဲ့နေရာမှာ ရောဂါ ရှိ-မရှိစစ်ရမယ်။
(၃) Free T4 / Free Thyroxine - FT4 ပုံမှန် = 0.7 to 2.0
- Less than 0.7 is considered indicative of possible hypothyroidism
- 0.7 ထက်နည်းနေမယ်ဆိုရင် လည်ပင်းကြီး ဟော်မုန်းနည်းရောဂါဖြစ်နိုင်တယ်။
(၄) TSH Test -- Thyroid Stimulating Hormone / Serum thyrotropin
- ဓါတ်ခွဲခန်း တခုနဲ့တခု မတူပါ။ ကိုယ်စစ်တဲ့ဓါတ်ခွဲခန်းက ပုံမှန်သတ်မှတ်ချက်ဆိုတာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရမယ်။